Isisombululo se-Acne Pimple Patches-eSebenzayo sePlaster Solution
Igama: I-WILD + Amabala amaqhakuva amaqhakuva
Iphakheji: Iipatches ezingama-72. 8mm * 48ea + 12mm * 24ea
Iindidi zolusu: Oyile, uMdibaniso, uQinisekiso, owomileyo, Ulusu oluqhelekileyo
1. Yithi ndlela ntle kwiziphako zolusu
Ezi ziqwengana zincinci, ziguqukayo, kwaye zisebenza ngokukhawuleza amabala amabala asebenza ngokukuko ekufuneni isiphako esikhulayo okanye ibhokhwe esele ikho. Isincamathelisi-esinjenge-hydrocolloid sisebenza njengesigqubuthelo sokhuselo ngaphezulu kwendawo enyangiweyo ukuze isiphako sibonakale sincinci kwithuba elingaphantsi kosuku olunye.
2. Isicelo esilula
Kulula kakhulu ukufaka iindawo ezinamabala amdaka, coca nje indawo kwaye usebenzise ipaki enye kwindawo efuna unyango. Susa i-micro dart emva kweeyure eziyi-8 uze ucoce loo ndawo uze ufake enyepatch, ukuba iyafuneka.
3. Ngenkohlakalo simahla
IiPeach Slices patches zenziwe ngefomula ecocekileyo engenatywala kwaye ayiqulathanga iikhemikhali eziyingozi, kwaye ayinankohlakalo kwaye ayina vegan. Zibangela iintlungu zero kodwa zomelele ngokwaneleyo ukuba zihlale ubusuku bonke kwaye zinokunxitywa phantsi kwento yokwenza.
4. Ilungele zonke iintlobo zolusu
Isiphatho sesiphako sendawo efanelekileyo sisebenza kuzo zonke iintlobo zolusu: Zomile, zinamafutha, ziqhelekileyo, kwaye zidityanisiwe. Ukucoca i-Blemish akukaze kube lula kwaye ngaphandle koxinzelelo!
1. I-WILD + i-Acne Pimple Patches inceda ukunciphisa ubomvu bamabala;
2. Umphezulu wehydrocolloid ukugcina indawo echaphazelekayo ifumile ekhuthaza ukuphiliswa kolusu
3. Khusela ekungcoleni nasekunxibelelaneni nabantu bangaphandle.
4. Ingasetyenziswa ngaphambi kokwenza isicelo sokunceda ukugcina indawo echaphazelekayo icocekile.
1. Coca ubuso bakho kuqala;
2. Faka isiciko kumaqhakuva uze ucinezele ezantsi ngokuqinileyo emaphethelweni;
Shiya isikhewu kwindawo echaphazelekayo kangangeeyure ezingama-6 +;
4. Susa isiziba emva kokuba kufakwe i-whitehead.
Sukuyisebenzisa ipatch kunye nezinye iimveliso ezinamayeza.
Nceda uqhagamshelane nogqirha wakho ngokukhawuleza ukuba i-acne yakho ibe yimbi emva kokusebenzisa.
Sukusebenzisa ukuba isongelo ekuqaleni sikrazukile okanye sonakele.
Sukuyisebenzisa emva komhla wokuphelelwa kwayo.
Egqithileyo Ikhithi ye-Headrest kit-yexesha likaxakeka
Okulandelayo: I-WILD + Intlungu yokuKhulula
Amabala amaqhakuva ebusweni
Amachaphaza amancinci amaSalicylic Acid
I-36 Acne Pimple Patches-eSebenzayo yokuTyabeka isisombululo